क्रियाशील सदस्यहरूलाई पाखा लगाइयो : ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, धनुषा (असन्तुष्ट पक्ष)
० धनुषामा फोरम नेपालमा फुट देखिएको छ । तपाईंहरूले समानान्तर रूपमा जिल्ला कार्यसमिति चयन गर्नुभएको छ । किन ?
— आन्दोलनमा हाम्रो पार्टीले देखाएको सक्रियताका कारण आम जनता यो पार्टीमा आबद्ध हुन चाहन्छन् । तर, केही व्यक्तिले जनता जोडिन नदिएर पार्टीलाई सीमित घेराभित्र राख्न खोजेका छन् । साथै सक्रिय कार्यकर्ताहरू गाउँ कमिटी अध्यक्षहरू, क्षेत्र कमिटी सदस्यहरू, जिल्ला कमिटी सदस्यहरूलाई पनि कृयाशिल सदस्यता नदिई तह लगाउन खोजियो । त्यसैले हामी पार्टीभित्र संघर्ष गरिरहेका छौं । हामी स्वशासन र पहिचानको राजनीति गरिरहेका छौं । स्वशासन र पहिचानको राजनीति गर्नेहरू आफ्नै पार्टीभित्र यी कुरा प्राप्त गर्न सकेनन् भने अरूलाई के दिलाउन सक्छन् ? यस विषयमा हामीले नेतृत्वलाई पनि अनुरोध गरेका थियौं । तर, पार्टीले सीमित व्यक्तिलाई मात्र कृयाशिल सदस्यता दियो । हो, यसकै विरोधमा हामीहरूले बाध्य भएर छुट्टै अधिवेशन गर्नुपरेको हो ।
० असन्तुष्टि कसरी चुलियो ?
— धनुषामा ५ हजार ७ सय ८५ जनाले क्रियाशिल सदस्यताका लागि फारम भरेका थिए । तर, एकपक्षीय रूपमा २ हजार ७ सय ८४ क्रियाशिल सदस्यलाई नियतवश तरिकाले पाखा लगाउने काम गरियो । क्रियाशिल सदस्यता जिल्लाबाट पास गराउनुपर्नेमा मुख्य पदका पाँच जना मात्र बसेर निर्णय गरेर पास गराएका थिए । र, त्यो फेरि प्रदेश समितिबाट अनुमोदन गराइएको थियो । त्यो वैधानिक होइन । अवैधानिक तरिकाले प्रदेश समितिलाई झुक्याउने काम गरियो । आन्दोलनकारी र क्रियाशिल सदस्यलाई पाखा लगाउने कामको विपक्षमा हामीहरूबीच विवाद भएको हो । त्यस विवादका कारण छुट्टा–छुट्टै अधिवेशन भएको छ । हामीले धनुषा साइन्स क्याम्पसमा अधिवेशन गरेका थियौं । त्यो अधिवेशन बेलाको केही तथ्यांक भन्न चाहन्छु । धनुषा जिल्लामा हाम्रो पार्टीका सात जना केन्द्रीय सदस्य छन् । जसमध्ये पाँच जना हामीसँग थिए । प्रा. डा. रामस्वार्थ राय, साधुशरण यादव, चमेलीदेवी दास, प्रेमचन्द्र झा र अरूणसिंह मण्डल हामीसँग थिए । दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यासी बनेका फोरम नेपालका सात जनामध्ये ६ जना हामीसँग थिए । सात क्षेत्रका अध्यक्षमध्ये पाँच क्षेत्रीय अध्यक्ष हामीसँग थिए । यसका साथै जिल्ला कार्यसमितिका ७२ जनामध्ये ४० जना हामीसँग थिए ।
० भनेपछि बहुमत तपाईंहरूसँग छ ?
— बहुमत पनि हामीसँग छ । आम जनता पनि हामीसँग छ । प्रतिबद्ध कार्यकर्ता पनि हामीसँग छ । त्यसकारण जनकपुरमा भएको अधिवेशन आधिकारिक अधिवेशन हो ।
० तर, संस्थापन पक्षका केन्द्रीय नेताहरू ढल्केवरकै अधिवेशनमा गएका थिए । तर, तपाईको अधिवेशनमा आएनन् नि ?
— केन्द्रबाट आएका साथीहरूलाई यी कुरा थाहै हुन सकेन । म पनि अधिवेशनको ढल्केवरमै विवाद मिलाउन खोजेको थिएँ । एकताको सन्देश दिन खोजेको थिएँ । अधिवेशनको दिन म ढल्केवर गएको थिएँ । दिउँसो १ बजेसम्म म त्यही थिएँ । तर, जिल्ला कार्यसमितिको संकीर्ण सोचका कारण कुरा मिल्न सकेन ।
० तपाईंको आरोप छ कि क्रियाशिल सदस्यको नाम हटाइयो । भनेपछि त यो कुरा तपाईंहरूलाई पहिल्यै थाहा थियो नि होइन र ?
— हो । यो कुरा पहिले नै आइसकेको थियो । दुई जनालाई त्यो मिलाउनका लागि जिम्मेवारी दिइएको थियो । विवाद मिलाउन तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष शेषनारायण यादव र मलाई केन्द्रबाट जिम्मा दिइएको थियो । तर, कन्जरभेटिभ सोचका कारण त्यो विवाद मिल्न सकेन । त्यसकारण स्वाभिमानको राजनीति, अधिकारको राजनीति र आफूलाई समाजवाद भन्ने व्यक्तिले आफैंभित्र त्यो कुरा अवलम्वन गर्न सकेनन् भने राजनीतिको अर्थ नै भएन । त्यसकारण हामीले अधिवेशन गर्नुप¥यो । हामीलाई माइन्युट पनि हेर्न दिइएन । त्यसपछि विवाद श्रृजना भयो । त्यसपछि हामीले ढल्केबाट आएर धनुषा साइन्स क्याम्पसमा अधिवेशन ग¥यौं ।
० सहमति जुटाउनमा केन्द्रको भूमिका कस्तो रह्यो ?
— केन्द्रको भूमिका सकारात्मक छ । केन्द्रको भूमिकामा कुनै प्रश्न छैन । हामी एक भएर अगाडि बढ्छौं । यसमा दुई मत छैन । संघीय समाजवादी फोरम नेपालप्रति जनताको आकर्षण छ । फोरम नेपालले नै अधिकार दिलाउन सक्ने कुरा आम जनतालाई थाहा छ । त्यही भएर यो पार्टीमा धेरै मानिस जोडिन खोजेका छन् । जोडिन खोज्नेलाई पाखा लगाउने काम गरियो । त्यसकारण क्रियाशिल सदस्यता सबै साथीलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि यो ठूलो समस्या रहँदैन । हामी एकताको फेरि सन्देश दिन्छौं । यो पदको विवाद होइन । यो पहिचानको विवाद हो ।
० तपाईं धैर्य किन गर्न सक्नुभएन ? केन्द्रलाई राखेर विवाद मिलाउन सक्नुहुन्थ्यो नि ?
— कुनै ठाउँमा घाउ भएको छ भने निचोडेर खिल निकाल्नुपर्छ । त्यसपछि घाउ सन्चो हुन्छ । नत्र घाउ सन्चो हुँदैन । हो, खिल निकाल्ने बेलामा दुख्छ । तर, पछिलाई एकदमै सन्चो हुन्छ । त्यसैले यो समस्या समाधान गर्नका लागि अर्को विकल्प थिएन ।
० धनुषा फोरम पार्टी कार्यालय बाँडफाँडको स्थितिमा पनि पुगिसकेको हो ?
— पार्टी कार्यालय हामीसँग छ । हामीले पार्टी कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौं । हाम्रो सबै बैठक पार्टी कार्यालयमै भइरहेको छ । उहाँहरू आएकै छैन ।
० तपाईंहरूले आउन नदिएको हो ?
— होइन, होइन । हामीले रोकेका होइनौं । मेरो चन्देश्वर महतोजी (धनुषा फोरमका अर्को समूहको अध्यक्ष) सँग कुरा भइरहन्छ ।
० चन्देश्वर महतो पक्षले के भन्छ ?
— उहाँहरूले पनि त्यही भनिरहेका छन् । तत्कालीन नेतृत्वको संकीर्णताले सहमतिको अधिवेशन हुन नसकेको भनिरहेका छन् । हामी एक भएर आउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि भनिरहेका छन् । एक हुन तयार छु भनेर मैले पनि भनेको छु । हामीमाथि जनताले धेरै विश्वास गरेका छन् । त्यही भएर हामीबीच विवाद हुँदैन । हामीबीच रहेको कुरीतिलाई समाप्त गर्दै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
० त्यसका लागि कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?
— प्रयास भइरहेको छ । म नै सबैसँग कुरा गरिरहेको छु । समस्या समाधान हुन्छ ।
० यो विषयमा केन्द्रले के भनिरहेको छ ?
— ‘धनुषामा आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहने साथीहरूमध्ये तिमी एउटा छौं’, भनेर केन्द्रले भनिरहेको छ । ‘तिमी नेता छौं तिमी समस्या मिलाउ’ भनेर केन्द्रले भनिरहेको छ । हामी मिलाउँछौं ।
० भनेपछि कहिलेसम्ममा धनुषा फोरम नेपाल एक भएको सुन्न पाइन्छ ?
— एकदम छिट्टै सुन्नुहुनेछ । सकारात्मक रूपमा कुरा अगाडि बढेको छ । सुरक्षित अवतरणका लागि म जे पनि गर्न तयार छु ।
० अहिले धनुषामा फोरम नेपालका दुई वटा जिल्ला कार्यसमिति रहेका छन् । भनेपछि समस्या समाधानका लागि तपाईं आफ्नो पद छोड्नुहुन्छ कि फेरि अधिवेशन गराउनुहुन्छ ?
— सबभन्दा पहिला म के भन्छु भने आधिकारिक हामी हौं । हामीलाई मान्यता हुनुपर्छ । तर, कुनै पनि स्थितिमा पार्टीभन्दा ठूलो व्यक्ति हुँदैन । पार्टी रह्यो भने अध्यक्ष त फेरि हुन सकिन्छ । पार्टीमा प्रभाव प¥यो भने भोलि हामी सानो जमातका मात्र नेता बन्न सक्छौं । त्यही भएर पार्टी बचाउन जे गर्नुपर्छ, जसरी गर्नुपर्छ त्यो केन्द्र र जिल्लाका साथी बसेर मिलाउँछौं ।